Ganacsade caan ah oo lagu dilay suuqa Gaalkacyo kadib markii la weeraray gaari uu watay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ganacsade caan ah oo lagu dilay suuqa Gaalkacyo kadib markii la weeraray gaari uu watay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in koox hubeysan ay maanta suuqa magaaladaasi ku dileen nin ganacsade ah caan ka ahaa halkaasi.
Ninkaan la dilay oo lagu magacaabi jiray C/laahi Cismaan Axmed ayaa sida la sheegay deegaan ahaan kasoo jeedaa galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana la dilay xilli uu gaari ku dhex-watay suuqa magaalada Gaalkacyo.
Kooxdii dilka u geysatay ganacsade C/laahi Cismaan Axmed ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo goobtaasi baaritaano ka sameeyay.
Ilaa iyo haatan ma jirto war kasoo baxay maamulada Puntland iyo Galmudug, kaas oo ay kaga hadlayaan dilka loo geystay ninkaasi ganacsadaha ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda galbeedka magaalada Gaalkacyo.
Dilka ninkaan ayaa kusoo beegmaya xilli ay xiisad ka taagan tahay magaalada Gaalkacyo, tan iyo markii uu halkaasi ka dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee maaamulka Puntland, mana jirto cid maanta loo soo qab-qabtay dilka loo geystay ganacsadahaasi caanka ah.
Wixii kusoo kordha dib kala soco Insha Allaah